Agụmakwụkwọ Geology - Geofumadas
Julaị, 2021 AulaGEO
AulaGEO bu atumatu nke ewuru kemgbe otutu oge, inye otutu usoro nkuzi banyere isiokwu dika: Geography, Geomatics, Engineering, Construction, Architecture na ndi ozo elebara anya na mpaghara nka.
N'afọ a, usoro ihe omumu ihe omimi nke emere ka enwere ike imuta ihe ndi isi, ike na ike ndi na eme ihe banyere uzo. N'otu aka ahụ, a na-atụle usoro ihe omumu nke mba na usoro mpụga nke nwere ike ịkpalite mbibi ihe omumu. Usoro a bụ maka ndị nwere mmasị na sayensị ụwa, yana ndị niile chọrọ ịnweta ozi doro anya ma dịkwa nkenke banyere akụkụ ala kachasị mkpa: dị ka mmejọ, nkwonkwo, ma ọ bụ folda.
AKWULKWỌ 1: Nhazi Geology
NK 2M XNUMX XNUMX: Nchegbu na nrụrụ
AKW 3KWỌ XNUMX: Nhazi Ala
IHE 4: Nchọpụta Ala
Nlereanya 5: Geology Software
Enweghị nkwadebe tupu oge achọrọ. Ọ bụ ezie na ọ bụ usoro iwu dị na mbụ, ọ zuru oke, dị mfe, a na-ewepụta ihe ọmụma yana gụnyere ọdịnaya niile dị mkpa iji ghọta usoro nrụrụ nke eriri ụwa. Anyị nwere olile anya na ị ga-erite uru na usoro a. pịa ebe a iji lelee ọdịnaya niile.
Previous Post«Previous INFRAWEEK 2021 - ndenye aha na-emeghe